Kunyangwe isu tiri munguva yezororo, iPhone 7 makuhwa ndiwo marongero ezuva. Iwo ekutanga anofungidzirwa mabhenji eiyo iPhone 7 inoti ichava 18% nekukurumidza kupfuura iPhone 6s, vhidhiyo inoratidza isu kufungidzira iPhone 7 isina headphone jack, asi zvakare bhatani mbeveve richanyangarikawo pane mamodheru matsva. Kana tikataura nezve bhatiri, zvinoita sekunge nekubvisa jack kubatana, Apple inogona kuwedzera mAh yeiyo iPhone 7 bhatiri, iyo ingave iri 14% yakakura. Yakanangana neiyo iPhone 7 isu takakwanisawo kuona mifananidzo mitsva sezvavaizove iyo itsva EarPods ine mheni kubatana. Kunyangwe kune rimwe divi Apple yaigona kusangana pamwechete neiyo iPhone iyo nyowani AirPods, isina waya mahedhifoni asina chero mhando tambo.
Kana isu tichitaura nezve Apple mune zvese, iyo kambani iri mukati Cupertino inotarisira kuvhura nzvimbo nyowani yeR & D kuGrenoble, France, for kunatsiridza mashandiro uye wedzera mamwe mabasa kune iyo iPhone uye iPad kamera. Apple yakapa miriyoni imwe yemadhora kune isiri yehurumende NGO muChina kubatsira mukununura nekuvakazve mabasa nekuda kwekunaya kwakaita nyika. Sezvo zvisinganzwisisike sezvazvinogona kurira Russian Apple Stores haina basa rekugadzirisa zvishandiso isina kuvharwa newaranti yakadai sekuchinja kwescreen, chimwe chinhu chinozochinja nekukurumidza nekuda kwekunyunyuta kwemushandisi. Kutaura nezveApple Watch, sekureva kweJD Simba kudzidza, Apple's smartwatch ndiyo inopa kugutsikana zvakanyanya kune vatengi.
Yakakodzera Kubudirira kuri kuita Pokémon GO kutenderera pasirese, mu iPhone News isu tataurawo nezve iyi nyowani Nintendo mutambo uyo unozowanikwa muSpain nedzimwe nyika dzeEurope kubva Chishanu chapfuura. Dambudziko nekushandisa kweIOS kwakabata vese vashandisi vaishandisa yavo Google account kunakirwa nebasa Dambudziko iri akapa mukana kuzere kuakaundi yedu yeGoogle pachinzvimbo chekungopa ruzivo chete nezve yedu tsamba uye yedu ID. Mukutanga kwe mutambo uyu urikupa mari yakawanda kune Apple pane iyo kambani yeNintendo pachayo zvakananga, pasina kufunga kuti Pokemon Kambani iri zvakare kubva kuJapan yakasimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Zvakanakisa zvevhiki muActualidad iPhone
Google inogadziridza Hangouts zvakare ichibvumira kusanganisa vatori vechikamu kubva mumapoka